Marxuum-Mijir Qaadi oo Shalay Lagu Aasay Magaaladda Burco | Dhaymoole News
Marxuum-Mijir Qaadi oo Shalay Lagu Aasay Magaaladda Burco
July 3, 2017 - Written by wariye999
Burco (Dhaymoole)- ALLE ha u naxariistee weriyihii caanka ahaa marxuum Maxamed Maxamuud Axmed oo ku magac dheeraa (Mijir Qaadi), oo habeen hore ku geeriyooday magaaladda Burco ayaa shalay gelinkii danbe lagu aasay isla Burco.
Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiiru-dawlaha wasaaradda xanaanadda xoolaha, maamulka gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golaha degaanka Burco, madax dhaqamaeed iyo dadweyne kale.
Marxuum weriye Mijir Qaadi ayaa ka mid ahaa weriyeyaashii ugu magaca dheeraa ee ka soo shaqeeyay idaacadaha radio Hargeisa iyo radio Muqdisho, Waxaanay marxuumka weriyeyaashii aqoonta u lahaa ee ay soo wada shaqeeyeen ku tilmaameen in uu ahaa weriye isku darsaday cod-karnimo iyo soo jeedin wanaagsan oo dadka deeqsiin kara waxa uu sheegayo.
ALLE ha u naxariistee Mijir Qaadi, ayaa 1962-kii waxa uu markii u horaysay ku biiray idaacadda radio Hargeisa, isagoo markii danbe-na u wareegay idacadda radio Muqdisho.
Weriyaha rug cadaaga ah ee Maxamuud Cabdi Ducaale, oo ka mid ah weriyeyaashii ay marxuumka ka soo wada shaqeeyeen idaacadda radio Muqdisho ayaa ka sheekeeyay aqoonta dhinaca weriyenimo iyo shaqsiyadeed ee uu u lahaa ALLE ha u naxariistee marxuum/weriye Mijir Qaadi.
Waxaanu yidhi “1961-kii ayuu shaqadda ka bilaabay radio Hargeisa, waxaa intaa ka horaysay wuxuu ahaa kal-kaaliye caafimaad (Nurse) oo wuxuu ka shaqayn jiray cusbitaalka guud ee Hargaysa. Markii uu warbaahinta ku soo biiray wuxuu ka shaqayn jiray raido Hargeisa, markii danbe-na waxaa loo bedelay raido Muqdisho.
Waxyaabihii uu caanka ku ahaa ee uu sameeyay ama uu warbaahinta ku soo kordhiyay waxaa ka mid ahaa barnaamij la odhan jiray Kedis, oo aan u malaynayo in ilaa hadda ay idaacadaha qaarkood sii wadaan, barnaamijkaasi oo ahaa barnaamij aqooneed ayuu caan ku noday, ciyaaraha-na wuu jeclaa oo iyagana wuu samayn jiray. Oday weyn oo taariikh weyn leh ayuu ahaa. Barnaamijka Kedis laftiisa ayuu la tegay radio Muqdisho oo uu ka sii dayn jiray.
Muddo dheer ayaanu wax wada qabanay oo aanu wada shaqaynay, markii danbe-na dalka Ingiriiska ayaanu wada deganayn. Waxaan u malaynayaa inta suxufiyiinta ama raggii idaacadaha ka shaqeeyay, cid ka weynayd oo nooli in aanay jirin oo uu isagu ugu danbeeyay.”
Weriye Ducaale, waxa kale oo uu hadlay dabeecad ahaan waxyaabaha uu ka xasuusto maruuxm/weriye Mijir Qaadi, “Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo ku dhac leh, oo aan waxba qarsan marka ay wax xumaadaan ama marka doodaha iyo warbaahinta la isugu yimaado ee wax la sheegayo, waxa kale oo uu ahaa nin kafdan wanaagsan, wuxuu ahaa nin bulshay ah oo dadka jecel.”ayuu yidhi weriye Maxamuud Cabdi Ducaale oo la hadlay idaacadda VOA.
Weriye Ducaalle oo ka waramayay meelaha uu wakhtiyadii danbe deganaa ama ku noolaa marxuumku, waxa uu yidhi “Wuxuu joogay inta badan dalka Ingiriiska oo uu deganaa magaaladda Sheffield, Hargaysa-na in badan ayuu joogay, inkastoo aanu hawlo badan ka qaban jirin, laakiin mudooyinka danbe oo weliba aan damcay in aan wax ka duubo wuu xanuunsanayay oo Burco ayuu joogay”.